"Mr Don" was not so bad
Aakar December 28, 2008
Had it not been for ‘ Sano Sansar’ this summer’s box office hit film, most urban youngsters would have found it difficult to recall the last Nepali movie they watched with so much enthusiasm. They readily agree to watch Hindi and English films over our Nepali films on any given day. After all, where would Nepali films stand in comparison to films like Titanic and Harry Potters series. The appeal factor is equally negligible in our Nepali film stars for their very youngsters who are so used to steamy scenes of Brangelina in Hollyhood films. Except forafew films, Nepali Film Industry has not produced movies that have been remarkable in any aspect be it in technicality or content. The once sought after industry seems to have been stagnant since the last decade. Inspite of being surrounded by Nepali film haters, I decided to watchaNepali movie last week. “Mr Don” read the movie posters. The name just didn’t feel right in Nepali fonts. Nepali film makers seriously have run out of names
फ्रि एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर कम्युनिटि नेपाल, एउटा यस्तो समूह हो जुन समुह फ्रि एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवयेर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । केही वर्ष पहिले स्थापना गरिएको FOSS Nepal Community, नेपाल मा फ्रि एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढेको संस्था हो । अब आज उल्लेख गर्न खोजेको प्रसंगमा जाउँ होला । FOSS Nepal Community ले आयोजना गर्ने रेगुलर इभेन्ट अन्तर्गत "फोस का कुरा" भन्ने कार्यक्रम को निमन्त्रणा यहाँ बाट म सबैलाई खुल्ला रुप मै दिइरहेको छु । यहाँहरु पनि यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, फोस नेपाल को फ्रि एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भने यहाँहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ, कार्यक्रम मा । विस्तृत विवरण यहाँ तल दिइएको छ । This is an invitation to you all to the upcoming FOSS Ka Kura (FKK) which is being organized by Madan Puraskar Pustakalya (MPP). Please find the details of the programme below: Topic: "Formatted Nepali Text Conversion" Venue: Yala Maya Kendra, Lalitpur, PatanDhoka Date: Friday January 9,
मुगुमा अवस्थित रारा ताल को सयर गराउँदै छु । हामी प्राकृतिक रुपमा कति धनि छौँ, अनि हामी सँग असंङ्ख्य सम्पदाहरु छन् तर हामीले तिनीहरुको भरपुर उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । आज यहाँ फोटो मार्फत रारा ताल सयर गराउँदैछु, हाम्रो सम्पदाबारे जानकारी दिलाउँदैछु । Be Proud: This is our Rara Lake. राराको रङ... मुगू सदरमुकाम गमगढी । तपाईंसँग एक रुपैया को नोट छ भने एक पटक राम्रो सँग हेर्नुहोस् त। यो त्यही पहाड हो जुन त्यो नोटमा छापिएको छ। यो मुगू जिल्ला को प्रख्यात डाँडा हो। जसलाई त्यहाका बासिन्दाहरु चन्खेली डाँडा भनेर सम्बोधन गर्छन्। राराको रङ... सबै फोटोहरु (Rara Lake) दाजु, मेलोडियस मिलन ले खिच्नु भएको हो ।
केयूमा थाइल्याण्ड काण्ड
Aakar December 20, 2008
विद्यार्थीहरूलाई “टार्गेट” गरेर छिट्टै नै थाइल्याण्डमा आयोजना हुन गइरहेको “अन्तराष्टिय सांस्कृतिक सम्मेलन”मा नेपालबाट जम्मा-जम्मी ४७ जनाले सहभागिता जनाउने भएका छन् र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हाम्रो काठमाण्डौं विश्वविद्यालयबाट त झन् १७ जना विद्यार्थीहरुले सहभागिता जनाउने छन् र थाइल्याण्ड घुम्ने सुनौलो अवसर पनि प्राप्त गर्नेछन् । के तपाई केयूको विद्यार्थी भएकोले त्यस १७ जनाको नाम लिष्टमा आफ्नो नाम देख्न चाहनु हुन्छ ? यदि चाहनु हुन्छ भने अहिले २५० शब्द नघटाइ “Relationship between Nepal and Thailand and it’s future” शीर्षकमा एउटा निबन्ध लेख्नुस् र A-4 size को कागजमा प्रिन्ट गरेर आफ्नो सम्बन्धित स्कुलको डिनको ] approval signature गराएर विद्यार्थी मामिलाका निर्देशक प्रो डा सञ्चयनाथ खनालज्यूलाई बुझाउनुहोस् । के थाहा तपाइँको थाइल्याण्ड टुरको सपना पुरा भइहाल्छ की ? तर… अब यो सपना साँच्नु व्यर्थ भइसकेको केयूका धेरैजसो विद्यार्थीको गुनासो रहेको छ । दुइ हप्ता अगाडी उक्त “अन्तराष्टिय सांस्कृतिक सम्मेलन” सम्बन्धित लिखित सूचना केयू प्रशासनमा आएको तर केयू विद्यार्थीहरु माझ उक्त महत्वपूर्ण सूचना जानीजानी
Aakar December 19, 2008
जाडो बढेको छ, अनि जाडो बढेको संकेत दिने गर्दछ, हुस्सु र कुहिरो ले । आज यहाँ मैले केही फोटोहरु राखेको छु । भन्दिहालौँ, अब मेरो फोटो ब्लग अपडेट हुनेछैन, जति जे अपडेट हुनेछ यही ब्लग र अर्को सर्लाही अन्लाइन भन्ने ब्लग अपडेट हुनेछ । पुष महिना को एक बिहान, काठमाडौँ विश्वविद्यालय वरिपरि का दृश्यहरु यहाँ राखेको छु । भन्ने नै हो भने अहिले जाडो निक्कै बढिसकेको छ । बिहान देखिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय भवन । वनेपा तर्फको भाग, जुन कुहिरो ले टम्म छोपिएको छ । उज्यालो भैसक्यो, तर पश्चिम आकाश मा चन्द्रमा अझै झुल्किरहेकाछन् । कुहिरो ले सबैकुरा ढाकिदिएको छ ।
Aakar December 16, 2008
ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज को कुरा भैरहेको छ, क्लासमा । अझ नविकरणिय उर्जा अर्थात Renewable Energy Source को बारेमा त क्लास मा लामै बहस हुने गरेको छ । हामी नविकरणिय उर्जा भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ, क्लासमा । सर भन्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ, हामीले नविकरणिय उर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । त्यसको लागि हामी सर्वसुलभ जलविद्युत अर्थात बिजुली को प्रयोग गर्न सक्छौँ । खाना पकाउन, पानी तताउन बिजुलीको प्रयोग गर्ने हो भने, सस्तो पनि पर्न आउँछ, साथै वातावरण पनि जोगिन्छ । लाग्छ, हामी वातावरणविद हौँ र हामी अरुलाई उपदेश दिइरहेका छौँ । यहाँ सबैले वातावरण को बारेमा चासो राख्नु जरुरी छ, भन्दै । क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङ को विषयमा पनि निकै तातो बहस गरिरहेका छौँ । बिजुली बाट प्रदुषण नहुने भएकाले, डिजेल, पेट्रोल, ग्यास, मट्टितेल आदि को सट्टा मा बिजुली को प्रयोग गर्दा बढ्दैगएको ग्लोबल वार्मिङ लाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खाना बनाउन, सिलिन्डर एलपि ग्यास को सट्टा मा बिजुली प्रयोग गर्दा कति फाइदा हुन्छ, आदि आदि कुराहरु कपि मा हिसाब गरिरहेका छौँ, क्याल्कुलेटर थिचिथिचि । थाहा पाइयो, हामी सँग कत
Aakar December 11, 2008
आज विश्व मानव अधिकार दिवस । विश्व मा आधुनिकता सँगै मानवअधिकार उल्लंघन का घटनाहरु मा पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । मूख्यरुपमा, राजनितिक आस्थाका कारण ले धेरै भन्दा धेरै मानवअधिकार उल्लंघन को घटना घटिरहेको छ । एम्नेस्टि इन्टरनेसनल बाट: Amnesty International has called on governments to make the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rightsatime for action not just for celebration. आउनुहोस्, हामी पनि मानवअधिकार दिवस को दिन मानवअधिकार कहिले उल्लंघन गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गरौँ । यसका लागि तपाईहरु, यो तल को मैनवत्ति बाल्न सक्नुहुन्छ । अनि यो मैन बत्तिलाई कहिले निभ्न नदिनुहोस् । आउनुहोस्, यो मैनबत्ति कहिले निभ्न दिने छैन भनेर प्रण गरौँ । अन्त्यमा, मानवअधिकार दिवस को उपलक्ष्यमा सबैले सुख र शान्तिपुर्वक बाँच्न सकियोस भन्ने कामना गर्दछु ।
आकाश गड्गडाएर पानी बर्सन्छ धर्‌धर काँप्छ सडकको पुत्र निर्वस्त्र भै उ थर्‌थर छैन वस्त्र उ'मा, कैले आधा पेट उ भर्दछ कहिले त झनै भन्दा अभावमै उ मर्दछ । छैन कोही यहाँ मान्छे मान्छे को दु:ख हेरने जोछन् जति सबै आफ्नै दुनो रोटि समाउने विवेकी जनको ज्ञान आज कुन्नी कता गयो मानव सेवा परम धर्म भन्ने सुक्ति कहाँ गयो ? न छन् आमा बुबा उस्का स्नेहले काखमा लिने न छन् आफन्त कोही नै उ मर्दा शोकले रुने कठैबरा भनिदिन्न आज लौ मान्छे ले किन ? कैले आउला सुखी दिन, गनिरन्छ उ दिन-दिन, गनिरन्छ उ दिन-दिन ॥ -समिर पोखरेल बायोटेक दोस्रो वर्ष, काठमाडौँ युनिभर्सिटि ।
युवा र मानव अधिकार
Aakar December 08, 2008
अपडेट: काठमाडौँ विश्वविद्यालय एम्नेस्टि इन्टरनेसनल युथ नेटवर्क ले आयोजना गरेको कार्यक्रम "मानवअधिकार र युवाको भूमिका" विषयक कार्यक्रम मा मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले राख्नुभएको विचार सुन्नुहोस् । आज मिति २०६५ मंसिर २२ गते आइतबार का दिन काठमाडौँ विश्वविद्यालय धुलिखेल मा “मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र,१९४८ डिसेम्बर १०” (Universal Declaration for Human Right) जारी भएको ६० औँ वर्ष को सन्दर्भमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय एम्नेस्टि इन्टरनेसनल युथ नेटवर्क (Kathmandu University Amnesty International Youth Network) ले "मानव अधिकार र युवाहरुको भुमिका" विषयक अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रम मा तीन सय भन्दा बढि युवा विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम तीन बजे सुरु भएर साँझ साँढे पाँच बजे सकिएको थियो । कार्यक्रममा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय का भूतपुर्व विद्यार्थीहरुले निर्माण गरेको “उजेली” नामक वृतचित्र समेत प्रदर्शन गरिएको थियो । कार्यक्रम को सभापतित्व काठमाडौँ विश्वविद्यालय एम्नेस्टि इन्टरनेसनल युथ नेटवर्क का संयोजक ओमप्रकाश सापकोटा ले गर
यहाँ म बम को कुरा गर्दैछैन, तर बम विस्फोटनले पारेको असर फोटो मार्फत देखाउँदैछु । हुन त फोटो को लागि भनेर छुट्टै ब्लग बनाएको छु, अनि कम्प्युटर टेक्नोलोजी को लागि अर्को बनाएको छु । तर अहिले एउटै ब्लगमा पनि समय दिन गाह्रो बैरहेको छ, अत: सबै ब्लग अपडेट गर्नु भनेको काम गाह्रै हुँदोरहेछ । हुन त म समय यही ब्लगलाई दिने गर्छु, अनि खासमा भन्ने हो भने, अरु ब्लगलाई प्रमोट पनि गरेको छैन तर पनि नतिजा सन्तोषजनक नै छ । यहाँ म दिनहुँजसो झुल्कन्छु भने अरु ब्लगमा महिनौँ पनि रेगुलर नहुन सक्छु, यसका आफ्नै कथाहरु छन् । खैर, आज को पोष्ट को प्रसंगमा जाउँ होला । यहाँ फोटोहरु राखिएको छ, करिब महिना दिन अघि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर मा बम पड्किएको स्थल को । बाँकि कुरा त यही फोटो अनि क्याप्सन ले भन्नेछ । एक महिना अघि दुई जना बालबालिका को मृत्‍यु हुने गरी चपुर चोक मा भएको बिस्फोटको कारणले सुकेको रुख । मध्यमाञ्चल महोत्सब को प्रचार को लागि राखिएको ब्यानर। गौरमा भएको उक्त महोत्सबमा भएको बिस्फोट ले गर्दा पुरै महोत्सब नै असफल भएको थियो। सबै फोटोहरु दाजु "मेलोडियस मिलन" ले अस्ति रौतहट जाँदा खिच्नुभएको हो
रुनु थियो सँधैभरि, हाँस्न सकिएन । उदासि यो जिवनमा खुशि भेटिएन ॥ संगी मेरी गईसकी, चट्टमाया मारी । झरीसरी आशुँ झर्छ, थाम्न सकिएन ॥ तिम्रो याद एकाएकै, आउँछ आजभोलि । सपनीमै भएपनि, भेट्न सकिएन ॥ सपनाका महलहरु, कति थिए यहाँ । भत्के सबै कम्पिएर, रोक्न सकिएन ॥ तिमीबिना एक्लै अब, बाँच्ने छैन मन । आफैँलाई आफैँ किन रेट्न सकिएन ॥ -मुकुन्द अनडेस्टिनि बायोटेक - दोश्रो वर्ष, केयु
Aakar December 02, 2008
पानी खान पाइएन, पानी को हाहाकार छ । पानी नपाउँदा कस्तो हुन्छ, सायद मैले भनिरहनु पर्दैन होला । तर पनि मेरा लागि नयाँ अनुभव नै हो, पानी को लागि तड्पिनुपरेको । शान्तिपुर्ण आन्दोलन नसम्झने अनि बुझेर पनि बुझ पचाउने प्रशासन, अनि तोडफोड नगरी कुनैपनि समस्या को समाधान निस्कँदैन भन्ने जनता, खै, के भन्ने - के भन्ने, कोही पनि कम छैनन् । पानी आन्दोलन को घोषणा गरेको करिब हप्ता दिन अगाडि तर सम्बन्धित पक्ष को ध्यान गएन, या भनौँ सम्झन चाहेनन् । केही दिन अघि यहाँ, "खानेपानी उपभोक्ता समिति" को पुतला पनि बनाइएको थियो । अनि हिन्दु बिधि अनुसार हरियो बाँस मा कात्रो ले नै बेरेर केयु गेट अगाडि जलाइएको थियो, चेतावनि सहित माग पुरा नभए, कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छौँ भनेर । तर त्यतिखेर कसैको कान मा बतास पसेन, कुनै मिडिया ले फुकेन । जब पाइप फुटाइयो, सबैको एकैपटक आँखा खुलेको छ । मिडियामा पनि राम्रै कभरेज छ अनि केयु मा पनि यसै विषयमा मिटिङ चलिरहेको छ । अब पाइप कहिले जोडिने हो, कहिले पानी को सप्लाइ यथावत हुने हो, अनिश्चित नै छ । अनिश्चितताको बिचमै केयुमा भने, केही ट्याङ्कर खानेपानी ल्याइएको छ । तर ओसारेको पानील